Home Wararka Dhuuniqaatayaashii Muddullood oo Marka kale dhabarjebin Raba Guusha soo dhow ee Doorashada.
Dhuuniqaatayaashii Muddullood oo Marka kale dhabarjebin Raba Guusha soo dhow ee Doorashada.
Waa caado marka ay umaddu badan tahay in gudaheeda laga helo caada qaadaqaatayaal mar waliba ka hor yimaada danaha beeshan iyo tan qaranka oo is huwan. Beeshan faqiir kama aha mana ku yara rag ay ahayd inay hogaamiyayaal qaran noqdaan oo haddana isu badalay calooshood u shaqeystayaal.
Iyadoo ay soo dhowdahay waqtigii doorashada dalka, isla markaana ay dhamaan lahayd xaaladda mugdiga ah oo uu dalkaan u bixi lahaa iftiin ayaa waxay caadaqaatayaal ka wadaan Kulamo lagu abaabulayo odayaasha Beesha Abgaal si looga dhaadhiciyo dhabar jebinta howlaha R/Wasaare Rooble, waxaana arrinkaas loo xilsaaray Cali Maxamed Geeddi. Kulankaas ayaa labadii maalin ee u dambeysay lagu qabtay hoyga duqa Muqdisho Cumar Finish oo isaga ay la degtay hogaanxumo iyo fashil iyadoo magaalada Muqdisho ay COVID19, Dhiiqo, bullacado, Biyao la’aan iyo ammaandarro xoog leh ay la liidato.
Kulamadaan waxaana goobjoog ka ahaa koox aan iska ceshan khaladka sida duqa Muqdisho, Ugaas Maxamuud Cali Ugaas , Muxuddiin Xasan Afrax, Cumar Cali Rooble, Cabdulahi Geedi Shador & Xunba kale.
Waxaa kulanka la iskula soo qaaday sidii loo abuuri lahaa jawi Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Farmaajo uu kusoo ceshan karo awoodihii doorashada & Amniga ee uu RW ku wareejiyey 1-dii May iyo side Shabaka logo toogan lahaa Rooble. Waxaa la qorsheynayaa in kulamada ay noqdaan kuwa la isugu keeno beelaha kala duwan ka dibna taageero loogu muujiyo Farmaajo, taas oo ah ceeb, foolxumo, dembi Iyo takano dalkaan iyo dadka Muqdisho laga galayo.
Cali Maxamed Geeddi ayaa waxaa la sugayaa in mar uun lagula xisaabtamo xasuuqii uu Xamar ka geystay isagoo isticmaalaya ciidamada cadowga Itoobiya ee dalka xoogga ku soo galay Desember 2006.
Shirarka noocan ah waa dembi qaran waxaana haboon inay beesha iska qabato ragaan faashiliinta ah oo magaca beesha dhaawacaya. Mudullood waxay sami la tahay qaranka Somaliyeed waana hooyada qaranka, mana aha inay u dul qaadato koox dhuuniqatayaal ah oo mar waliba ku fac ah cidda caloosha u buuxisa.
Waayo beeshaan waxay mar waliba u taagneyd in qaran Somaliyeed uu jiro iyadaa biileysay dhammaan dowladihii dalka soo maray oo ay ku jirto tan hadda joogta. Waxaa la hubaa inaan loo dulqaadan Karin inay calooshood u shaqeysatayaal Fahad iyo Farmajo u shaqeynaya ka shaqeeyaan inuu Xamar dagaal ka dhaco oo la burburiyaa aan hadda laga aqbali doonin waxa ay wadaan waa in lagula xisaabtamaa.
Aaway ciidankii Badbaado qaran miyeysan kooxdaan u sheegi karin inay fidnada umaadda kala dhexbaxaan.
Inaad faker duwan qabtid macnaheedu maaha inaad ka shaqeyso in qarankan oo ay beshaas uga baxday hanti badan la dumiyo ama Xamar dagaal loo horseedo. Cumar Finish lacagta uu kooxdan ku casuumayaa COVID ha ku daaweeyo, bullaacadahana cudu rada ka dhaesheen oo uu COVID ku fido ha ku furo.
Martini Hospital in Mogadishu, Somalia. Years of conflict, instability and poverty have left Somalia ill-equipped to handle a health crisis like the coronavirus pandemic. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)